Mustaf Faransa oo galabta ciyaaraya kullankiisii ugu dambeeyay horyaalka Soomaaliya – Gool FM
jilacow May 11, 2016
(Muqdisho) 11 Maajo 2016.Kooxaha Dekedda iyo Banaadir ayaa galabta kullan xiiso badan waxa ay ku wada ciyaari doonaan garoonka Koonis ciyaar ka tirsan horyaalka Soomaaliya.
Kullan ayaa ah mid adag iyadoo kooxda Dekedda ay dooneyso in ay difaacato booskeed labaad,halka Banaadir ay diidan tahay in laga badiyo mahadaama aan horay loogu adkaan xilli ciyaareedkaan horyaalka Soomaaliya.
Kabtanka hore kooxda Banaadir kana mid ah daafacyada kooxdaas ee Mustaf Faransa ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ciyaaraha ka fariisan doono galabta kulanka ugu dambeeya horyaalka oo ay garoonka Koonis ku dheeli doonaan.
Mustaf ayaa wareysi uu siiyay Gool FM waxa uu ugu hadlay sababta uu ugu fariisanayo kubadda cagta iyo waxa u qorsheysan kaddib siibista kabiiisa.
Maxey Tahay sababta aad ugu fariisaneyso kubadda cagta?
“ Waxaan waqti siinayaa ciyaartooyda da’da yar ee kooxda ku sugan kuwaas oo ka ciyaara daafaca waayo waxaa la jogaa waqtigii ugu haboonaa ee aan ka fariisan lahaa kubadda cagta.
Horay ma ugu fikirtay inaad ka fariisato kubadda cagta?
“ Haa waxaan doonayay in xilli ciyaareedkii hore aan ka fariisto kubadda cagta balse waxaa iga diiday macalin Huseine Mblanga
Mahadaama aad galabta kabaha iska siibeyso maxaa kuu qorsheysan.
“ Waxaa ii qorsheysan in aan lasii shaqeeyo kooxdeyda Banaadir, waxaana ka mid noqon doonaa macalimiinta kooxda ayuu yiri Mustaf Faransa oo wareysi siinayay Gool FM.
Sikastaba Mustaf Faransa ayaa ciyaaraha heerka koowaad kusoo biiray sanadka markuu ahaa 1998-kii, isagoo hal xilli ciyaareed kusoo qaatay kooxdii Gor Gor, waxaana kaddib uu ku biiray kooxda Banaadir oo ilaa iyo iminka uu ka tirsan yahay.
Man United oo soo bandhigtay maaliyadeeda kulamada bannaanka... (Laakiin qiime ahaan imise ayey ku kacaysaa?) + SAWIRRO